कृषि विकास बैंकका सिइओ अनिल उपाध्यायसहित ६ जनाले कार्यालय भित्रै यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप ! - Kantipath.com
कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अनिल कुमार उपाध्यायसहित ६ जना उच्च अधिकारी विरुद्ध सामुहिक यौन दुर्व्याबहारको आरोप लागेको छ ।
कार्यालयमै कार्यरत एक महिला कर्मचारीले सिइओ उपाध्यायसहित उच्च अधिकारी विरुद्ध यौन दुर्व्यबहारको आरोप लगाएकी हुन् ।
ती महिलाले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि प्रहरी कार्यालयसम्म उजुरी दिएपनि दर्ता भने नभएको स्रोतले बताएको छ ।
‘विपक्षी अनिल कुमार उपाध्याय त्यस कार्यालयको प्रमुख रहेको बखत मलाई शारीरिक शोषण तथा यौनहिंशा गर्न खोजेकोमा मैले आफ्नो अस्मिता बेचेर काम गर्न नमानेकोले म जाहेरवाला र निज विपक्षी अनिल कुमार उपाध्याय पुन मुख्यकार्यालय सरुवा भए पश्चात पनि म अधिकृत पदको कर्मचारीलाई घरको श्रीमती समानरुपले तिमी भन्दै शब्द प्रयोग गर्ने, रातसँगै बस्नेगरि फिल्ड जाउँ भन्ने घरमा एक्लै भेट्न आउँछु भन्ने, अफिसमा एक्लै बोलाएर लामो समयसम्म राखि महिला हिंसा हुने शब्दहरु प्रयोग गर्ने गरेपनि मैले कुनै प्रस्ताब नमाने पश्चात सन् २०१९/१२/१८ गते करिब १२ बजे उहाँले भने बमोजिम एक्लै उहाँकै कार्यकक्षमा भेट्न जाँदा निवेदन खण्डमा उल्लेखित व्यक्तिहरु जम्मा गरि मलाई नीच रुपमा तिमी धन्दा गर्ने भन्दै यौन दुर्व्यबहार गर्न खोेजेकाले त्यहाँबाट भाग्न सफल भए पश्चात उक्त कार्यालय गएको छैन,’ उजुरीमा भनिएको छ ।
महिलाले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सम्बोधन गरेको उजुरीमा भने आफूलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको अडियो समेत उपलब्ध भएको उल्लेख छ । तत्कालिन समयको सिसिटिभी फूटेज समेत मगाएर हेर्न उनले माग गरेकी छिन् । सिइओ उपाध्यायले फोन उठाएनन्
प्रतिक्रियाका लागि यौन दुर्व्यहारको आरोप लागेका सिइओ उपाध्यायको मोबाइल नम्बरमा पटक पटक फोन गर्दा उनले फोन उठाएनन् । अन्तिम प्रयासमा उनलाई फोन गर्दा उनले फोन काटे । दियोपोस्ट
Previous Previous post: ओलीले बोलाए एमाले केन्द्रिय समिति बैठक : ४ नेतालाई प्रवेश निषेध !
Next Next post: भद्रकालीमा १२ वर्षमुनिका बालकको गुरुकुल शिक्षा
एक रुपैयाँमा स्मार्टफोन….
कांग्रेस बझाङ काठमाडौं सम्पर्क समितिले रक्तदान कार्यक्रम गर्ने
नेतृत्व विकाससँगै महिला आयआर्जनसँग जोडिनुपर्दछ – उपसभामुख शर्मा
भोलि र पर्सि काठमाडौंबाट बाहिर पठाउने निर्णय रद्द